अयोध्या कहाँ पर्छ भारतलाइ नै थाहा छैन ! - Nepali News Nepal
अयोध्या कहाँ पर्छ भारतलाइ नै थाहा छैन !
जुलाई 16, 2020 जुलाई 16, 2020 Bishwa Ghatana0Comments अयोध्या
अयोध्या त्रेतायुगीन श्रीरामको जन्मस्थल हो । प्राचीन ग्रन्थहरुमा श्रीरामको राज्य अयोध्या रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीरामको जन्मभूमि सम्बन्धमा उठाउनुभएको दाबी भने पहिलो होइन । श्रीरामको जन्मस्थलको ’boutमा दाबी गरिएको स्थलको सूचीमा थप एक स्थान थपिएको छ ।
← नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गर्ने व्यक्ति धनकुटाबाट पक्राउ
पुरातत्त्वकाे टोली नेपालको अयोध्यापुरी पुग्यो, शुक्रबारबाट काम थाल्ने →